Teknolojiyada PCB - Pandawill Technology Co., Ltd.
Marka lagu daro dhammaan heerarka PCB ee caadiga ah ee aan bixinno, Pandawill waxay sidoo kale bixisaa dhowr geedi socod oo dheeri ah oo midkoodna hagaajinaya waxqabadka guddiyada wareeggaaga ee la xiriirta adeegsiga loogu talagalay, ama gacan ka geysanaya geeddi-socodka shirarka heerarka badan si loo yareeyo foosha loona hagaajiyo hufnaanta wax soo saarka.
Dahaarka 'dahaarka dahabka adag: Codsiyada u baahan heerar sare oo gees ah ama isku xirnaanta dusha iyadoo la adeegsanayo faro dahab ah ama suuf isku xira.
Maaskarada iibiye ee la iibin karo: Pandawill waxay bixisaa heerka ugu wanaagsan ee ganacsi ahaan la heli karo ee maaskaro ka sameysan maqaarka oo la isticmaali karo si loogu isticmaalo geeddi-socodka kululaynta kuleylka badan. Lakabka iska caabida ee la isticmaali karo ayaa loo isticmaalaa in lagu daboolo aagagga aan la iibinaynin inta lagu jiro hannaanka ruxruxa. Lakabkan dabacsan ayaa markaa kadib si fudud looga saari karaa si looga tago suufka, godadka iyo meelaha la iibin karo oo xaalad kaamil ah u ah geeddi-socodka shirarka dugsiga sare iyo galinta qaybaha / isku xiraha.
Vias indha la ': Soosaarka taxanaha ah, qoditaanka laser-ka ayaa ah midka kaliya ee dhaqaale, laakiin maahan xalka kaliya ee farsamo ahaan macquul ah. marka la sameynayo, mashiinka qodista ee ugu casrisan ee CNC (makaanig) iyo aalado gaar ah oo hal-abuur leh ayaa la heli karaa si loo soo saaro godad farsamo ahaan loo qoday oo isku mid ah oo tayo leh isla markaana ugu yaraan si siman waxtar u leh.
Fiisooyinka la buuxiyey: Waxaa jira dhowr la soo buuxiyay iyadoo la adeegsanayo xulashooyin u dhigma baahidaada. Vias waxaa lagu buuxin karaa mid ka mid ah dhejiyeyaasha biraha wax lagu sii wado ee sii socoshada, epoxy resin si loogu isticmaalo halka PCB uu ka sameysto caqabad firfircoon oo ku saabsan codsiyada asliga ah ee aaminka ah iyo naxaasta la buuxiyo si ay uga caawiso kala daadashada heerkulka ee ka hooseeya qaybaha u dhigma jiilka kuleylka deegaanka ee guddiga.
Daabacada Kaarboon: Kaarboon waxaa loo isticmaalaa kiiboodhka iyo xiriirada LCD iyo biinanka xiriirka. Lacquerku wuxuu ku saleysan yahay kaarboon oo si fudud ayaa loogu isticmaali karaa dusha sare maadama ay ka kooban tahay waxyaabo badan oo adag.
Caqabado la xakameeyay: xakamaynta xakamaynta ayaa inta badan looga baahan yahay tikniyoolajiyada microwave, warbaahinta, qaybaha milatariga iyo isgaarsiinta. waxaan kaliya u isticmaalnaa alaabada la xaqiijiyay oo leh koronto-dhimis koronto (Dk) koontarool iyo arrimo lumis / faafitaan (Df) oo waxaan soo saarnaa baaritaanka ku habboon si loo waafajiyo shuruudahaaga dalabka